NY ANDRIAMANITRY NY KRISTIANA
Accueil Ny Mpitandrina Fampianarana NY ANDRIAMANITRY NY KRISTIANA
Publication : 1 novembre 2003
Ny kristiana dia mino an’Andriamanitra Izay niteny tamin’ny alalan’I Jesoa Kristy, sy nanambara ny tenany tamin’ny alalan’ny Soratra Masina voarakitra ao amin’ny Baiboly.
Efa nisy hatrizay hatrizay talohan’ny fahariana izao tontolo izao Andriamanitra. Izao zavatra hary rehetra izao no misy dia nohon’ny asan’ny tanany( Gen 1:1 ; Jaona 1:1).
1° Ny Atao hoe " ANDRIAMANITRA" Iza moa Andriamanitra ?
Ny fanekem-pinoana kristiana dia manondro mazava fa Andriamanitra no Mpahary sy namorona ny lanitra sy ny tany mbamin’izay rehetra ao aminy avy amin’ny tsy misy ;izay mampaharitra azy rehetra sy mitondra azy araka ny fahendreny sy ny fitondrany tsy miova mandrakizay.
Ao amin’ny tantara miresaka ny fahariana ao amin’ny Baiboly, dia miseho mazava fa ny Mpahary dia MITENY : "Misia ny mazava" ; dia nisy ny mazava. Miteny sy miasa manavaka ny mazava amin’ny maizina Izy. Miteny amin’ny olona koa Andriamanitra ao amin’ny asam-pahariana nataony ka manome asa sy andraikitra ho an’ny olona hanohy ny asam-pahariana efa natombony( Gen 1 hatramin’ny Gen 7).
Ireo anton-javatra ireo dia mampiseho ny fahasamihafana misy sy manavaka an’Andriamanitra amin’ny sampy sy ny andriamanitsi-izy ateraky ny finoanoam-poana sy ny kisendrasendra.
Ny zavatra rehetra dia tsy tongatonga ho azy fa avy amin’ny tanan’Andriamanitra Ray (Asa 17:25 ; Jer 5:24 ; Asa 14:17 ; Ohab 22:2). Andriamanitra dia nahary ny olona ho tsara sy araka ny endriny, izany hoe ho olona tena marina sy masina mba hahazoany avy amin’Andriamanitra Mpahary azy ny fahalalana mahitsy ka hahatonga azy ho tia an’Andriamanitra amin’ny fony manontolo sy ho velona ao Aminy amin’ny fahasambarana tanteraka ka hankasitraka sy hanome voninahitra Azy( Gen 1:26,27,31 ; II Kor 3:18 ; Kol 3:9-10 ; Efes 4:23-24).
Raha miantso an’Andriamanitra ho Ray sy Tsitoha isika, dia miantso Ilay Mpahary ny zavatra rehetra Izay mitondra sy mampaharitra ary manavao azy isan’andro. Ao Aminy no ametrahana ny fitokisana, sy ahazoana antoka fa Izy no manome ny zavatra ilain’ny tenantsika sy ny fanahitsika sady manova ho tsara ny ratsy izay navelany hiatra amintsika. Azon’Andriamanitra atao izany satria Izy no Andriamanitra Tsitoha. Tiany ny hahatanteraka izany satria koa Izy no Andriamanitra Ray mahatoky.
Afaka miantso an’Andriamanitra hoe RAY TSITOHA isika kristiana noho ny fitiavany ao amin’I Jesoa Kristy, Izay nananganany ny rehetra mino Azy, ho zanaka miara-mandova ny fanjakany mandrakizay.
2° Ny andriamanitra diso : Inona no atao hoe andriamanitra diso ?
Izay rehetra mifanohitra sy manohitra an’Andriamanitra Ray Tsitoha Mpahary ny lanitra sy ny tany sy izay rehetra ao aminy.
Ireo zavatra namboarin’ny tanan’olombelona, na koa ireo zava-boahary izay ametrahan’ny olona fitokiana sy finoana fa manana hery manao fahagagana, ka mamonjy sy manome valim-bavaka azy. Noho izany dia tompoina sy amasinina, hajaina sy atahorana mihitsy aza. Hita eraky ny firenena eto ambonin’ny tany ny andriamanitra diso, samy manana ny tantarany manokana avy.Tamin’ny andro taloha , dia ny Grika sy ny Romana no nalaza tamin’ny fananana andriamanitsi-izy, ary teo amin’ny tantaran’ny Zanak’Israely dia efa hita ihany koa ny finoana sy fanompoana andriamanitra diso
Izay rehetra inoana ivelan’Andriamanitra Mpahary dia atao hoe andriamanitra diso avokoa. Paoly dia milaza fa Andriamanitra velona ny Andriamanitry ny kristiana( Asa 14:15).Fanavahana ny Andriamanitry ny kristiana amin’ny andriamanitra hafa ny famaritana hoe "velona".Na dia antsoina ho andriamanitra aza ireo andriamani-kafa na andriamanitra diso ireo, dia "andriamani-poana" izy, satria tsy misy , tsy velona.
Ny Andriamanitry ny kristiana dia Andriamanitra Velona satria Izy no Andriamanitra misy marina, Izy no loharanon’ny fiainana rehetra sy ny zava-misy rehetra. Ny andriamani-kafa na andriamanitra diso dia tsy velona, satria tsy manan-kery hamonjy( 1Sam 17:26,36 ; Jer 10:10).
Velona ny Andriamanitry ny Kristiana satria Izy dia zava-misy aina (être) , na fanahy miasa, tsy mijery na miandry fotsiny ny manodidina Azy.Velona Izy, satria Tompo miaro sy manampy ny olony ary mampanantena azy fahasambarana( Deo 5:26).
3°Ny Andriamanitry ny kristiana :Andriamanitr’Abrahama, Andriamanitr’Isaaka, Andriamanitr’I Jakoba :
Tantarain’ny Gen 1 fa Andriamanitra no nahary ny lanitra sy ny tany ary ny zava-mananaina rehetra. Ny olombelona no tampon’ny asa famoronana nataon’Andriamanitra, fa natao araka ny endrik’Andriamanitra izy.
Nomen’Andriamanitra safidy malalaka ny olombelona, ka afaka handroso amin’ny tsara ; kanefa tsy toetra tsara tanteraka tsy mety hiharam-piovana izany.Nampiasai’ny olona ilay safidy malalaka nomena azy :nisafidy hanaraka ny feon’ny fakam-panahy avy any ivelany izy.
Nanota ny olombelona.Sady fahotan’ny olona tsirairay izany , no toetry ny taranak’olombelona rehetra. Manam-piraisana amin’ny zavatra sasany maromaro ny taranak’olombelona, anisan’izany ny fahotana izay nifandovana hatrany hatrany.Tonga voapentimpentin’ny toetra mitongilana ho amin’ny ratsy ny olombelona rehetra(Rom 5:12).
Voalazan’ny Soratra Masina mazava fa "fahafatesana no tambin’ny ota". Telo sosona ny fahafatesana dia : -Ny fahafatesana ara-panahy : fisarahan’ny olombelona amin’Andriamanitra noho ny fahotana ; simba ilay fifankahazoana tanteraka tamin’ny voalohany, -Ny fahafatesan’ny nofo : misaraka eo amin’ny fahafatesana ny fanahy sy ny vata-tena, -Ny fahafatesana mandrakizay : fisarahana mandrakizay amin’Andriamanitra.
Raha tonga ny fahasoavan’Andriamanitra, ny fahafatesan’ny nofo dia manjary fidirana amin’ny fiainana mandrakizay, ary izay rehetra mino an’I Kristy Jesoa, dia tsy voakasik’izany fahatesana mandrakizay izany. Manana ny fiainana mandrakizay ny olona mino Azy satria mananm-piraisana amin’Andriamanitra izay fototry ny fiainana.
Rehefa nanota ny olombelona dia nomen’Andriamanitra ny teny fampanantenana famonjena, na ny teny fikasana, izay tena zava-dehibe voalohany ao amin’ny Genesisy. Nomena ho an’ny solontenan’ny taranak’olombelona rehetra izany teny fikasana izany izay mikendry azy rehetra.Ny lehibe indrindra amin’izany dia I ABRAHAMA.
Nampanantenaina an’I Abrahama fa hoa azy ny tany Kanana ary hiseho eo amin’ny taranany ny fahatanterahan’ny famonjena ; fa hitranga eo amin’ny taranany ny MPANAVOTRA ,dia Kristy :" ?hahatonga anao ho firenena lehibe Aho sady hitahy anao sy hahalehibe ny anaranao, ary ho fitahiana tokoa ianao ; ary hitahy izay manisy soa anao Aho, fa hanozona izay manozona anao, ary aminao no hitahiana ny firenena rehetra ambonin’ny tany"(Gen 12:2-3). Izany hoe nitady lalana Andriamanitra hamonjena ny olona, tamin’ny nifidianany an’I Abrahama ho mpanalàlana.
Nino an’Andriamanitra Abrahama ka nisaina ho fahamarinany izany (Gal 3:6 ; Rom 4:3). Ny lalam-pamonjena tamin’ny Testamenta Taloha dia ny fandraisana amin’ny finoana ny teny fikasan’Andriamanitra milaza ny fahasoavany : "Finoana no naneken’I Abrahama, rehefa nantsoina hiainga hankany amin’ny tany ho azony ho lova, ka dia niainga izy , nefa tsy fantany izay alehany"(Heb 11:8)
. Hazavain’I Paoly fa nanondro an’I Kristy ny teny fampanantenana fitahiana ho an’izao tontolo izao, izay ho tonga amin’ny alalan’ny taranak’Abrahama( Gal 3:16). Nasehon’I Abrahama tamin’ny fahavononany hanatitra an’Isaaka zanany ny finoany ny teny fikasan’Andriamanitra. Ny finoan’I Abrahama ny hevitry ny teny fikasan’Andriamanitra sy ny hahatanterahany no nankasitrahan’Andriamanitra azy.
Isaaka no patriarka faharoa. Nomen’Andriamanitra azy koa ny teny fikasana, na ny momba ny tany Kanana izany na ny momba ny Fanavotana ?Gen 26:4). Lazain’ny Epistily ho an’ny Hebreo fa azon’ny taranak’Abrahama tamin’ny alalan’Isaaka ny fiantsoana ho olon’Andriamanitra, ary nanana finoana toy ny rainy ihany Isaaka, dia finoana fa hotanterahin’Andriamanitra ny teny fampanantenany( Heb 11:18-20).
Jakoba no patriarka fahatelo :Nanterin’Andriamanitra taminy koa ny teny fikasany :"..aminao sy ny taranakao no hitahiana ny firenena rehetra ambonin’ny tany"(Gen 28:14). Jakoba dia nino marina ny teny fikasan’Andriamanitra(Heb 11:21). Niteraka zanaka lahy 12 izy ary ireo no nanorina ny foko 12n’ny firenena Israely. Nolazain’I Jakoba fa hitranga ao amin’ny taranak’I Joda ny Mesia na Kristy :"Ny tehim-panjakana tsy hiala amin’I Joda"(Gen 49:10). Avy tamin’ny firenen’I Joda no nihavian’ny taranak’I Davida(Rota 4:18-22). Atao hoe " Liona avy amin’ny firenen’I Joda" sy "Solofon’I Davida" Jesoa Kristy (Apok 5:5) Ilay Tompo sy Andriamanitra Mpamonjy, fototra iorenan’ny fivavahana sy ny FINOANA KRISTIANA.
RAZAFIMAHATRATRA Marcellin, Mpitandrina FPMA MELUN.